သန္ဓေသား သွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
>> သန္ဓေသားသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သန္ဓေသားဆီက သွေးအနည်းငယ်ယူပြီး စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အမေ ဗိုက်နာနေချိန်မှာ ပွင့်နေတဲ့သားအိမ်ခေါင်းကနေတစ်ဆင့် သန္ဓေသားရဲ့ဦးခေါင်းကနေ သွေးကိုယူပြီး အောက်စီဂျင်ပမာဏကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီလို သန္ဓေသားသွေးယူပြီးစစ်ဆေးခြင်းကို သန္ဓေသားအထူးပြုဆရာဝန်ကနေ ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ သန္ဓေသားရဲ့ပြဿနာတွေကို ရောဂါရှာဖွေဖို့၊ ကုသဖို့၊ စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
● မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ခရိုမိုဆုန်းမူမမှန်တာတွေကို ရောဂါရှာဖွေဖို့
● ပြင်းထန်သန္ဓေသားသွေးအားနည်းခြင်း၊ RH သွေးအမျိုးအစားမတူညီခြင်း စတဲ့ သွေးပြဿနာတွေကို ရှာဖွေကုသဖို့
● သန္ဓေသားရဲ့အောက်စီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းတာဖို့
● သန္ဓေသားပိုးဝင်ခြင်းကို စစ်ဆေးဖို့
● သန္ဓေသားကို ဆေးတချို့ပေးဖို့ စတာတွေအတွက် သုံးပါတယ်။
>> သန္ဓေသားသွေးစစ်ဆေးမှုကို ဘယ်လိုလုပ်လေ့ရှိပါသလဲ?
သန္ဓေသားဆီကသွေးယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို သေချာပိုးသတ်ဆေးရည်နဲ့ဆေးကြောပြီး အာထရာစောင်းရဲ့အကူအညီကိုယူကာ အပ်အရှည်တစ်ချောင်းနဲ့ မိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သွေးကို အောက်ပါနေရာတွေကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။
● အသည်း သို့မဟုတ် နှလုံးတစ်ခုခုက သွေးကြောကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေသားသွေးသွင်းခြင်းကိုလည်း ဒီနည်းလမ်းတွေအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သန္ဓေသားကို သွေးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သန္ဓေသားထဲက မကောင်းတဲ့သွေးကို ကောင်းတဲ့သွေးနဲ့ လှယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ ကလေး မလှုပ်ရလေအောင် အိပ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလိုသန္ဓေသားသွေးယူစစ်ဆေးပြီးရင်တော့ မိခင်ဟာ ဆေးရုံမှာ ခဏတဖြုတ် အနားယူဖို့လိုပြီး ကလေးရဲ့နှလုံးခုန်သံကို နာရီပိုင်းမျှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရပါမယ်။
>> သန္ဓေသားသွေးစစ်ဆေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ
သန္ဓေသားသွေးစစ်ဆေးခြင်းဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးပြုလေ့လာထားတဲ့ဆရာဝန်မှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ တခြားစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့မှသာ၊ အသုံးမဝင်တော့မှသာ ဒီစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ၁၈ ပတ်နဲ့အထက် ကိုယ်ဝန်တွေမှာသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
● သန္ဓေသားသွေးယူတဲ့နေရာကနေ သွေးထွက်ခြင်း
● သန္ဓေသားရဲ့နှလုံးခုန်သံ ပြောင်းလဲခြင်း
● ရေမြွာရည်များ စိမ့်ထွက်ခြင်း
● သန္ဓေသားလေးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချက်အလက်ကောင်းတွေကို ရရှိနိုင်ခြင်း
● သွေးကိုပျက်စီးစေတဲ့ ရောဂါအပြင်းစားတွေကို စောစောစီးစီး ကုသနိုင်ခြင်း
၂၄.၁.၂ဝ၂၁ | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ရေမြွာရည်များခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ -
● ဝမ်းချုပ်ခြင်း စတာတွေပါပဲ။
ဒီလက္ခဏာတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းမှာ ဖြစ်နေကျပြဿနာတွေမို့ ဒါတွေရှိရုံနဲ့ ရေမြွာရည်များတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ရေမြွာရည...
၂၁.၁.၂ဝ၂၁ | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
မိခင်နို့ချိုဆိုတာ မွေးကင်းစလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး သဘာဝအာဟာရဓာတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မေမေတိုင်းကတော့ ကလေးနို့တိုက်ဖို့ အဆင်ပြေမှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီလို ကလေးနို့မတိုက်တဲ့မေမေတို့အတွက် နို့တင်းတာ၊ နို့ရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။